Tutorial video miisa 7 momba ny valin'ny lahatsoratra Krismasy izay tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Ny karazana effets an-tsoratra vitantsika avy amin'ny Adobe Photoshop dia goavana tokoa, raha ny marina dia efa namoaka fanangonana maromaro miaraka amina fampianarana tena mahaliana izahay matetika, toy ny amin'ny Ity lahatsoratra ityna East. Ankehitriny amin'ny fanararaotana ilay Krismasy efa manakaiky dia hiverina amin'ny enta-mavesatra isika miaraka amina tsangan-kazo vaovao an-tsoratra Krismasy ankehitriny. Toy ny karazan-drafitra rehetra dia mivoatra rehefa mandeha ny fotoana ny vokan'ny lahatsoratra. Miseho ny kinova sy fanazaran-tena vaovao izay mety ho fampianarana indrindra ary afaka manampy anao hiasa amin'ny teknikao ary hampisy vokatra vaovao. Ny fisafidianana izay entinay anao anio dia tsotra be, ka raha miditra amin'ilay fampiharana ianao dia mety tsara ho anao ireo fanazaran-tena ireo.
Ny sasany amin'ny teny anglisy fa satria izy ireo dia horonan-tsary amin'ny fotoana rehetra ahitantsika mazava tsara ny dingana manaraka, na dia mazava ho azy aza fa afaka mampiasa mpandika teny ianao (Ampy izay ny Google) na iray amin'ireo latabatra zarainay izay nandikana ny baiko fangatahana. Raha mahafantatra horonan-tsary hafa mety mahaliana ny vondrom-piarahamoninay ianao dia aza misalasala mizara izany aminay ao amin'ny faritra misy ny hevitra. Raha tsy misy resaka lavitra dia antenaina fa ankafizinao izany ary araraoty tsara avy amin'ireo fanazaran-tena ireo.
Vokatry ny vatomamy (caramel)
Vokatry ny jiro miloko
Vokany mahazatra miaraka amina volondavenona
Vokatry ny hatsiaka nateraky ny Disney
Vokatry ny hazo krismasy
Vokatry ny vatomamy version 2
Vokatry ny baolina fitaratra krismasy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fampianarana horonan-tsary 7 momba ny valin'ny lahatsoratra Krismasy izay tsy azonao adino